Ixabiso eliphantsi le-Multi-functional Forklift Type Supposting Equipment Suppliers kunye neFektri | YiZheng
Yintoni iForklift yohlobo lwezixhobo zomgquba?
Uhlobo lweForklift Izixhobo zokufaka umgquba ngumatshini ojika-mane-in-omnye ojikajikayo oqokelela ukujika, ukuhambisa, ukutyumza nokudibanisa. Inokuqhutywa kwindawo evulekileyo nakwiworkshop ngokunjalo.
Unokwenza ntoni uhlobo lwe-Forklift Type Composting Equipment?
Uhlobo lweforklift Ukwenza umatshini yimveliso yelungelo elilodwa lomenzi lenkampani yethu. Kufanelekile ukuba ibile kunye nomlinganiselo omncinci womgquba wemfuyo, udaka kunye nenkunkuma, ukucoca udaka kumatshini weswekile, okubi kakhulu ikhekhe le-slag kunye ne-sawdust ye-straw kunye nenye inkunkuma yendalo.
Xa kuthelekiswa nezixhobo zokujika zemveli.
Ukusetyenziswa koLuhlu lweForklift yezixhobo zokufaka umgquba
Inkqubo ye- Uhlobo lweforklift Ukwenza umatshini Isetyenziswa ngokubanzi kwisityalo sezichumiso eziphilayo, isityalo sesichumisi esimbaxa, udaka kunye nesityalo senkunkuma, ifama yezolimo kunye nesityalo se-bisporus sokubila kunye nokususwa kwamanzi.
Uhlobo lweForklift Izixhobo zokuBonisa iiVidiyo
Uhlobo lwe-Forklift yoKhetho lwezixhobo zemodeli
Nika iiparameter ezifanelekileyo ngokweemfuno ezithile zabathengi.
Egqithileyo Nkqo ukuvundisa Tank
Okulandelayo: Umatshini oziqhubela ngokwakho oguqula umatshini ojikajika